Kumari bank limited(Kumari bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
कुमारी बैंक पहिलोपटक अर्ब क्लबमा
काठमाण्डौ । कुमारी बैंक लिमीटेडले पहिलोपटक अर्ब क्लबमा प्रवेश गरेको छ । यो बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब खूद नाफा कमाएको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको नाफा ७० करोडमा सीमित थियो । यो बैंकले पनि संभावित जोखिम व्यवस्थापन कोषबाट २२ करोड बढी राइटब्याक गरी नाफा १ अर्ब कटाएको हो । बैंकले ८० करोडमा सीमित संचालन मुनाफामा भारी वृद्धि गरी १...
ज्योति र कुमारीबीच रेमिट सेवा आदानप्रदानको सम्झौता
काठमाण्डौ । ज्योति विकास बैंक र कुमारी बैंकबीच साउन २९ गते रेमिट सेवा आदानप्रदानको सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमूख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली तथा कुमारी बैंकका तर्फबाट निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृते उमेशसिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरे । यो सम्झौतापछि ज्योति विकास बैंकले हालै...
कुमारी बैंकको लाखौं कित्ता सेयर लिलामीमा, सस्तोमै पाउने अवसर
काठमाण्डौ । कुमारी बैंक लिमीटेडले लाखौं कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको छ । यो कम्पनीले हकप्रद निश्कासनको क्रममा नबिकेको ११ लाख ४१ ह्जार ३ सय ७४ दशमलव ५० कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो । बैंकले गत बैशाख २८ गतेदेखि १० बराबर २ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको थियो । सो क्रममा १ करोड १९ लाख ३८ हजार ९ सय ९१ कित्ता सेयर १०० अंकित दरले...
आइजीआई र कुमारी बैंकबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स(आइजीआई) लिमिटेड र कुमारी बैंक लिमिटेडबीच बैंकासुरेन्स सेवा सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र कुमारी बैंक लिमिटेडको तर्फबाट बरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरे...
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासमा कुमारी बैंकले ७० करोड ५६ लाखभन्दा बढी खूद नाफा आर्जन भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यो बैंकले खूद नाफातर्फ गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८८ प्रतिशतले छलाङ मारेको देखिएको हो । बैंकले गत वर्ष यही अवधिसम्ममा ३७ करोड ५८ लाख ९७ हजार मात्र नाफा आर्जन गर्न सकेको थियो । कुनै निकै...
कुमारी बैंकको शेयर छ ? थाहा पाउनुहाेस्, हकप्रद कहिले भर्ने
काठमाडौँ । कुमारी बैंकले २० प्रतिशत हकप्रद निष्कासनका लागि आवेदन गर्ने मिति तोकेको छ । वैशाख ९ गते सम्म कायम शेयरधनीले बैशाख २८ गतेबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । शेयर धनीले आवेदन दिने अन्तिम मिति जेठ ३१ गते बैंकिङसमयसम्म रहेको बताइएको छ । बैंकले हकप्रद प्रयोजनका लागि आज (वैशाख १०) शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गर्ने जानकारी यसअघि नै...
कुमारीमा निःशुल्क डिम्याट खाता खोल्न पाउने यस्तो अफर
काठमाण्डौ । कुमारी बैंक लिमीटेडले निःशुल्क डिम्याट खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । साञ्जेन र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको आइपीओलाई लक्षित गर्दै पछिल्लो समय निःशुल्क डिम्याट खाताको अफर सार्वजनिक गर्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबीच होडबाजी नै चलेको छ । यही क्रममा कुमारीले पनि निःशुल्क डिम्याट खाता खोल्न सकिने अफर एक सूचनामार्फत...
कुमारी बैंक र सूर्य लाइफको हकप्रदले कति पाए इक्राको ग्रेडिङ ?
काठमाण्डौ । नेपालको एक मात्र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले कुमारी बैंक लिमीटेड र सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्सले निश्कासन गर्न लागेका हकप्रदका लागि रेटिंग प्रदान गरेको छ । इक्राले कुमारी बैंकबाट प्रस्तावित २० प्रतिशत हकप्रद सेयरलाई इक्रा एनपी आइपीओ ग्रेड फोर प्लसको रेटिङ प्रदान गरेको छ । यसको अर्थ आधारभूत भन्दा कमजोर अवस्थाको...
आशा जगायो कुमारी बैंकलेः संचालन नाफामा गिरावट र खराब कर्जा वृद्धि–चिन्ताको बिषय
काठमाण्डौ । संभावित जोखिम व्यवस्थापनबाट ठूलो रकम फिर्ता ल्याएर कुमारी बैंक लिमीटेडले नाफामा राम्रो प्रगति भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । यो बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै खूद नाफा करिब ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको, संचालन नाफा घटेको, तर रिजर्ब कोषमा भने राम्रो प्रगति...
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र कुमारी बैंक लिमिटेड बीच बुधबार एक कार्यक्रमबीच बैंकासुरेन्स सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणकुमार भट्टराई र कुमारी बैंकका तर्फबाट वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर...
नाफा घटे पनि कुमारी बैंकको आशालाग्दो प्रगति !
काठमाण्डौ । चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुमारी बैंक लिमीटेडले ११ करोड २० लाख खूद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा बैंकले १३ करोड ७४ लाख नाफा कमाएको थियो । बैंकले ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ राइट ब्याक गरे पनि नाफा बढाउन नसक्नुु राम्रो संकेत होइन । समीक्षा अवधिमा बैंकले खूद ब्याज आम्दानीतर्फ भने उल्लेख्य प्रगति...
हकप्रदको नाममा ८ बित्तीय संस्थाको फट्याई, बोर्डमा उजुरी
काठमाण्डौ । साधारणसभाबाट हकप्रद निश्कासनको प्रस्ताव पारित गरेर पनि त्यसका लागि आवश्यक अन्य प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै केही लगानीकर्ताले ८ बैंक तथा बित्तीय संस्थामाथि कारबाहीको माग गर्दै धितोपत्र बोर्डमा उजुरी दिएका छन् । काठमाण्डौ, नवलपरासी र भक्तपुरका ५ लगानीकर्ताले एक वाणिज्य बैंकसहितको ८ बित्तीय संस्थाले हकप्रद निश्कासनको...
कुमारी बैंकमा नर्भिकद्वारा स्वास्थ्य जाँच
काठमाण्डौ । आफ्ना कर्मचारी, तिनका परिवारका सदस्य एवम्, ग्राहक वर्गको उच्चस्तरीय स्वास्थ्य जाँच गराउने सिलसिलामा कुमारी बैंक लिमिटेड र नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलबीच आपसी सहमति भएको छ । सहमतिअनुरुप सुरुवातमा कुमारी बैंकले पुतलीसडक शाखाका कर्मचारी, तिनका पारिवारिक सदस्यहरू र आफ्ना ग्राहकमध्ये उपस्थित केही गरी करिब ५० जनाभन्दा बढी...
कुमारी बैंकको नाफा घट्दा निराश हुनु भो ? यस्तो छ भित्री कुरा
काठमाण्डौ । कुमारी बैंक लिमीटेडको नाफा घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ७१ करोड ६० लाख नाफा कमाएको यो वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७० करोड मात्र नाफा कमाउनसक्यो । तर, यो नाफा कुमारी बैंक र यसमा गाभिएका चारवटा कम्पनीको समीक्षा अवधिको १७ दिनको नाफा मात्र हो । चारैवटा कम्पनीको वास्तविक नाफा समेत जोड्ने हो भने कुमारी बैंकको वास्तविक मुनाफा...
कुमारीको एकीकृत कारोबार असार १२ गतेदेखि
काठमाण्डौ । एनसीसी बैंकसँगको मर्जरबाट अलग भई आफ्नै प्रयासमा पुँजी वृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको कुमारी बैंक लिमीटेड र उसँग बिलयको प्रक्रियामा रहेका अन्य चार बित्तीय संस्थाबीचको एकीकृत बित्तीय कारोबार आगामी असार १२ गतेदेखि हुने भएको छ । कुमारी बैंकले काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, महाकाली विकास बैंक, काक्रेबिहार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल...